Kyrgyzstan Presidential Elections | Sputnik Images media library
Supporters of presidential candidate Sadyr Zhaparov participate in a rally in support of him on Ala-Too Square in Bishkek, Kyrgyzstan. Sadyr Zhaparov, who was appointed Prime Minister of the republic in October 2020, won the early presidential elections of Kyrgyzstan with almost 80 percent of votes on January 10, 2021.
Presidential candidate of the Kyrgyz Republic Sadyr Zhaparov talks to his supporters at a rally in support of him on Ala-Too Square in Bishkek, Kyrgyzstan. Sadyr Zhaparov, who was appointed Prime Minister of the republic in October 2020, won the early presidential elections of Kyrgyzstan with almost 80 percent of votes on January 10, 2021.
Kyrgyz presidential candidate Sadyr Zhaparov says goodbye to his supporters after a rally in support of him at Ala-Too Square in Bishkek, Kyrgyzstan. Sadyr Zhaparov, who was appointed Prime Minister of the republic in October 2020, won Kyrgyzstan's early presidential election with almost 80 percent of the vote on January 10, 2021.
Journalists raise their hands to ask a question to Sadyr Zhaparov at a news conference on the results of the early presidential elections, in Bishkek, Kyrgyzstan. Sadyr Zhaparov, who was appointed Prime Minister of the republic in October 2020, won the early presidential elections of Kyrgyzstan with almost 80 percent of votes on January 10, 2021.
Presidential candidate of the Kyrgyz Republic Sadyr Zhaparov talks to the media at a news conference on the results of the early presidential elections, in Bishkek, Kyrgyzstan. Sadyr Zhaparov, who was appointed Prime Minister of the republic in October 2020, won the early presidential elections of Kyrgyzstan with almost 80 percent of votes on January 10, 2021.